मङ्गलबार ०७, साउन २०७६ ००:५३
शतक बनाउन चुके खडक, नेपालको तेस्रो विकेट पतन
मलेसियामा भइरहेको एसीसी यू–१९ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत सिंगापुर विरुद्धको खेलमा नेपालले तेस्रो विकेट गुमाएको छ । नेपालले तेस्रो विकेटका रुपमा ३९.५ ओभरमा विशाल विक्रम केसीलाई गुमाएको हो । उनी १ रनमा आउट भएका हुन् ।
सिंगापुरविरुद्ध रित गौतमको अर्धशतक पूरा
मलेसियामा भइरहेको एसीसी यू–१९ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत सिंगापुर विरुद्धको खेलमा नेपालका ओपनर रित गौतमले अर्धशतक पूरा गरेका छन् । उनले ६७ बलमा अर्धशतक पूरा गरेका हुन् । रित अघिल्लो खेलमा १० रनमा नट आउट रहेका थिए ।
सिंगापुरविरुद्ध खडक बोहराको शानदार अर्धशतक
मलेसियामा भइरहेको एसीसी यू–१९ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत सिंगापुर विरुद्धको खेलमा नेपालका खडक बोहराले शानदार अर्धशतक बनाएका छन् । उनले ४२ बलमा अर्धशतक पूरा गरेका हुन् । आज नेपालले पहिलो विकेट १४.३ ओभरमा पहिलो विकेटका रुपमा पवन सराफलाई गुमायो । उनी आज ४५ रनमा आउट भए ।
अर्धशतक बनाउन चुके पवन, नेपाललाई पहिलो झड्का
मलेसियामा भइरहेको एसीसी यू–१९ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत सिंगापुर विरुद्धको खेलमा नेपालका ओपनर पवन सराफ अर्धशतक बनाउन ५ रनले चुकेका छन् । उनी १४.३ ओभरमा ४५ रन बनाएर आउट भए । यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालले १६ ओभरमा एक विकेट गुमाएर १०१ रन बनाएको छ ।
सिंगापुरविरुद्ध नेपालले टस जित्यो, पहिला ब्याटिङ गर्ने
मलेसियामा भइरहेको एसीसी यू–१९ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत सिंगापुर विरुद्धको खेलमा नेपालले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको छ । किनारारा ओभल क्रिकेट मैदानमा भइरहेको खेलमा नेपालले आज तीन खेलाडी हेरफेर गरेको छ । चीन विरुद्धको खेलमा आराम दिएका कुशल मल्ल, विशाल बिक्रम केसी र तीब्र गतिका बलर राशिद खानलाई आज प्लेइङ ११ मा समावेश गरिएको छ ।
विश्वकप क्रिकेटः पहिलो र अन्तिम खेलमा वेस्ट इन्डिज पास !
इंग्ल्याण्ड र वेल्समा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा आफ्नो अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानलाई हराउँदै वेस्ट इन्डिजले सुखत अन्त्य गरेको छ । बिहीबार राति लीड्समा सम्पन्न खेलमा अफगानिस्तानलाई २३ रनले हराउँदै वेस्ट इन्डिजले सुखत अन्त्य गरेको हो । वेस्ट इन्डिजले दिएको ३१२ रनको लक्ष्यका साथ जवाफी ब्याटिङमा आएको अफगानिस्तानले निर्धारित ५० ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै २८८ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
विश्वकपः अन्तिम खेलमा क्रिस गेलले लिए विकेट
इंग्ल्याण्डमा जारी आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत आफनो अन्तिम खेलमा वेस्ट इन्डिज अलराउण्डर क्रिस गेलले विकेट लिन सफल भएका छन् । उनले आफ्नो अन्तिम विश्वकपको अन्तिम खेलमै ८६ रन बनाएर खेलिरहेका इक्रम अलिखिल एल्बीडब्लू आउट गर्न सफल भएका हुन् ।
शिक्षक सेवा आयोगले बिहीबार खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षातर्फ प्राथमिक तहको ४ जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले आज महोत्तरी, धनुषा, रोल्पा र दाङ जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।
बझाङको बुंगल नगरपालिका–२ कि युवती ललिता धामीको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । हत्या आरोपमा प्रहरीले डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–९ जोगबुढाका २६ बर्षीय माधव बोहरालाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले उनलाई ससुरालीमा लुकिछिपी बस्दै गरेको अवस्थामा प्रक्राउ गरेको बताइएको छ ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ सँग नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत प्रान्कोइज जेभियर लेगरले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । बिहीबार अपरान्ह उपराष्ट्रपति भवन ग्रीनहाउसमा फ्रान्सका राजदूत लेगरले उपराष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन् । भेटमा उपराष्ट्रपतिले नेपाल र फ्रान्सको सम्बन्ध धेरै पुरानो र उत्कृष्ट भएको बताए । उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध जनस्तरसम्म फैलिएको र प्रगाढ बन्दै आएको बताए ।
विश्वकप क्रिकेटः अफगानिस्तानले पायो ३१२ रनको लक्ष्य
इंग्ल्याण्डमा जारी आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत आफनो अन्तिम खेलमा वेस्ट इन्डिजले ३१२ रनको लक्ष्य दिएको छ । टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित ५० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर ३११ रन बनायो ।
नेपाललाई समूह विजेता बन्ने मौका, शुक्रबार सिंगारपुरविरुद्ध खेल्दै
मलेसियामा भइरहेको एसीसी यू–१९ इस्टर्न रिजन क्रिकेट अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा शुक्रबार नेपाल र सिंगापुर भिड्दै छन् । यी दुई टिमबीचको खेल बिहान क्वालालम्पुरस्थित किनरारा ओभलमा हुनेछ । यदि भोलि (शुक्रबार) सिंगापुरलाई हराए नेपाल समूह विजेता बन्नेछ ।
भीमदत्त नगपालिकामा नमूना युवा संसद स्थापना र अभ्यास कार्यक्रम सुरु भएको छ । तीन दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा भीनपाका १९ वडाबाट दुई÷दुई र अन्य राजनीति दल सम्बद्ध युवा संगठनका युवा सहभागी भएका छन् । भीमदत्त नगरपालिकाको सभाकक्षमा बिहीबार नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले ब्यानर वाचन गरी संसद स्थापना र अभ्यास कार्यक्रमको उद्घाटन गरे ।
सुमित पाठकको ‘समाचार’ बोलको गीत सार्वजनिक (भिडियो)
नेपाल आइडल सिजन–२ का सेकेण्ड रनरअप सुमित पाठकको समाचार बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको छ । बिहीबार युट्युब च्यानलमार्फत उनको यो गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।
विश्वकपः वेस्ट इन्डिजले टस जित्यो, क्रिस गेलको अन्तिम खेल
इंग्ल्याण्डमा जारी आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानविरुद्ध वेस्ट इन्डिजले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको छ । यी दुई टिमबीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३ः१५ बजेदेखि लीड्समा सुरु हुँदैछ ।
हेर्नुस्, ३६ जिल्लाको प्रा.वि तहको नतिजा (नामसहित)
शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको खुला तर्फको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा बिहीबार दिउँसोसम्म ३६ जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले गत असोज १३ गते लिएको प्रा.वि तहको परीक्षाको नतिजा गत साताको मंगलबारदेखि सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको हो ।
सुखत अन्त्यका लागि वेस्ट इन्डिज र अफगानिस्तान भिड्दै
इंग्ल्याण्ड र वेल्समा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा आज वेष्ट इन्डिज र अफगानिस्तान खेल्दै छन् । सेमिफाइनल दौडबाट बाहिरिसकेका यी दुई टोलीबीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो ३ः१५ बजेदेखि लीड्स क्रिकेट मैदानमा सुरु हुँदैछ ।
कोपा अमेरिका फुटबलः ४४ वर्षपछि पेरु फाइनलमा प्रवेश
चिलीविरुद्ध उत्कृष्ट जीत हासिल गर्दे पेरु कोपा अमेरिकाको फाइनलमा पुगेको छ । गत संस्करण विजेता चिलीलाई ३–० गोल अन्तरले हराउँदै पेरु फाइनलमा पुगेको हो । पहिलो हाफमा २ गोलको अग्रता लिएको पेरुले खेलको २१ औंँ मिनेटमा इडिसन फ्लोरिसले गोल गर्दै अग्रता लिए त्यस्तै ३८औँ मिनेटमा यासहिमार यूटिनले गोल गर्दै पेरुको अग्रतालाई दोब्बर बनाए। निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा चिलीले गोल गर्न भने सकेनन्।
विश्वकपः इंग्ल्याण्ड सेमिफाइनलमा, पाकिस्तानको सम्भावना कति?
इंग्ल्याण्ड क्रिकेट टिम २७ वर्षपछि आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा पुग्न सफल भएको छ । बुधबार राति न्यूजिल्याण्डलाई १०९ रनले हराउँदै इंग्ल्याण्ड २७ वर्षपछि विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुग्न सफल भएको हो । इंग्लिश टिम अन्तिम पटक १९९२ को विश्वकपमा सेमिफाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएको थियो ।
थप ५ जिल्लाको प्रा.वि तकाे नतिजा सार्वजनिक (नामसहित)
शिक्षक सेवा आयोगले बुधबार खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षातर्फ प्राथमिक तहको ४ जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले थप सुर्खेत, खोटाङ, सिरहा र जाजरकोट जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।
न्यूजिल्याण्डको खराब शुरुवात, सस्तैमा गुमायो २ विकेट
१२औं संस्करणको आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत इंग्ल्याण्डले दिएको ३०६ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा न्यूजिल्याण्डले सस्तैमा २ विकेट गुमाएको छ । उसले दोस्रो विकेटका रुपमा ५.२ ओभरमा मार्टिन गुप्टिल (८) लाई गुमायो । उनलाई जोफ्रा आर्चरको बलमा विकेटकीपर जोस बटलरले शानदार क्याच गरे ।
विश्वकपः इंग्ल्याण्डद्वारा न्यूजिल्याण्डलाई ३०६ रनको लक्ष्य
१२औं संस्करणको आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको महत्वपूर्ण खेलमा इंग्ल्याण्डले न्यूजिल्याण्डलाई ३०६ रनको लक्ष्य दिएको छ । टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको इंग्ल्याण्डले निर्धारित ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर ३०५ रन बनायो । उसका लागि जोनी बेरिस्टोले शतक बनाए । उनले १५ चौका र १ छक्काको मद्दतमा ९९ बलमा १०६ रन बनाए ।